I-China iQinise kwakhona i-Polyvinyl Chloride (MPVC-SR) yoNxibelelwano lwePipe yoNxibelelwano olungasebenziyo kunye nabenzi | Shengyang
Ukuqiniswa okumiselweyo kwePolyvinyl Chloride (MPVC-SR) Umbhobho woNxibelelwano ongafakwanga
◎ Ukuqiniswa okumiselweyo kwePVC (MPVC-SR) engeyiyo eyembiwa kunikezelo lombhobho wonxibelelwano onikezelwe ukungcwatywa
Okwangoku, kunxibelelwano iiprojekthi ezingezizo zokomba, imibhobho ye-PE kunye nemibhobho yesiseko yesilicon zisetyenziswa ikakhulu. Isizukulwana esitsha sokungagrunjwanga kumbhobho we-MPVC-SR ophuhliswe yinkampani yethu ungaphezulu kumbhobho we-PE kunye nombhobho wesiseko we-silicon ngokwendlela yokusebenza, indlela yoqhagamshelo, iindleko zokuthenga kunye nokuhamba.
◎ Ukumelana ngokugqwesileyo nefuthe lobushushu obuphantsi
Umbhobho wabekwa kwisikhenkcezisi esingu-15C, kwaye uvavanyo lwempembelelo lwenziwa emva kokukhenkcisa i-1H ​​ngaphandle kokuqhekeka. Unxibelelwano olulula kunye nolomeleleyo kakhulu lisebenzisa uqhagamshelo olukhethekileyo lweglue, olulungele ukudibanisa, kwaye amandla oxhulumaniso aphezulu kunamandla ombhobho ngokwawo.
◎ Nelangatye nekudodobalisa, ukhuselo lokusingqongileyo, ukumelana inyikima
Umbhobho we-MPVC-SR awumelana namalangatye kwaye uyacima, kwaye ukusebenza kwawo kwelangatye kudlula inqanaba le-V0, eliluncedo kakhulu kukhuseleko lomlilo. Izinto ezingafunekiyo zicocekile kwaye zinobuhlobo bendalo izinto zePolymer kunye nezongezo. Umbhobho ungena emhlabeni kwaye awunangcolisi kokusingqongileyo nasemhlabeni. Umbhobho ungcwatyelwe kubunzulu beesine-zesihlanu zedayam engaphandle yombhobho, kwaye isinye kwisihlanu sangaphandle sombhobho sivelisiwe ngaphandle.
◎ Ukubola kunye nokumelana nokuguga
Izinto ezingafunekiyo zombhobho we-MPVC-SR ubukhulu becala zi-calcium khabhayithi, ezinzileyo ngokwexabiso kunye nexabiso eliphantsi; ukungqinelana kwayo kokulingana kungu-0.25-0.35, udonga lwangaphakathi luthambile, uxhathiso lokutsala lincinci, kwaye ukuphuma komjikelo kungaphantsi kwe-1-3%. Ukusebenza kweendleko kungcono kakhulu kunombhobho weHDPE kunye nombhobho wesiseko wesilicon.
Ukwakhiwa okuphezulu kunye nokugcinwa okufanelekileyo kunye nokugcinwa
Umbhobho we-MPVC-SR uhlangabezana neemfuno zeemeko ezithile kwaye kufanelekile kwiindawo zokwakha ezineendonga, izindlu nezinye izakhiwo, ezinokudityaniswa ngelixa utsala. Kwaye akukho mbane ufunekayo kunxibelelwano okanye kulondolozo, kwaye iziseko ezikhethekileyo zeglue zinokusetyenziselwa ngokuthe ngqo uqhagamshelo kubushushu begumbi, obuguquguqukayo nolulungeleyo.